ကိုဗဈ လူနာ နဲ့ အိမျမှာ ဘယျလိုနမေလဲ ?? – Nyi Ma Lay
ကိုဗဈ လူနာ နဲ့ အိမျမှာ ဘယျလိုနမေလဲ ??
ကိုဗဈ လူနာကို ခုက အိမျမှာထား ပွီး ပွုစုရတဲ့အေ နအ ထားဖွဈလာပွီ။ ဒီတော့တခွား အိမျသားတှေ မကူးဖို့ဆို စပွီး နှာစေး ၊ ခြောငျးဆိုး ၊ ဖြား တခုခု စတာနဲ့ Covid လို့မှတျ။ မိုးမိတာတှေ ဘာတှေ မပွောပါနဲ့ ။Covid ပဲ။ ခှဲနပေါ။
ကွားထဲမှာ သကျသာသှားလို့တို့ ဘာတို့မလုပျပါနဲ့။ သကျသာပွီး လေးငါးရကျနရေငျအနံ့ ပြောကျရငျပြောကျ ၊ မပြောကျရငျ ဝမျးလြှော ၊ ခြောငျးဆိုး ၊ အောကျဆီဂငျြကတြှေ ဖွဈလာရော။ အဲ့ကြ တအိမျလုံးကူးပွီးပွီ။ ကိုဗဈက မာယာ မြားတယျ။
ကိုယျ့ကွောငျ့ ကိုယျ့မိသားစု တှေ ထိခိုကျခံနိုငျရငျတော့ သဘောပါ အခနျးသီးသနျ့ ခှဲ နရေမယျ။ အခနျးထဲက အပွငျထှကျရငျ Mask တပျကို တပျရမယျ။ ထမငျးစားရငျ အခနျးထဲမှာပဲ စားရမယျ။
စားပွီးသား ပနျးကနျတှကေို ကိုယျ့ဟာကို ဆေးရငျဆေး၊ မဆေးရငျ အခနျးထဲမှာ ဆပျပွာ ဇလုံထဲ ထညျ့ထား.. .ပွီးမှ….တခွား လူကို …ဆေးခိုငျးပါ ရခြေိုးခနျးနဲ့ အိမျသာက အခနျးထဲ ရှိရငျကောငျးတယျ။ မရှိရငျ ရခြေိုး ခနျးနဲ့ အိမျသာ သှားရငျ သတိထားပါ
အိမျသာသှားရငျ Mask တပျ ‼️ ရခြေိုးရငျ….. ****တံတှေး မထှေးရ**** ‼️ ****သလိပျမဟပျထုတျရ****‼️ တံတှေး ထှေးခွငျး သလိပျဟပျခွငျးကို အခနျးထဲ ရောကျမှ လုပျ။
ပွီးရငျ သလိပျတံထှေးကို အဖုံးပါတဲ့ ဗူးနဲ့ ထှေး ပွနျဖုံးထား။ ဖွဈနိုငျရငျ အဲ့ သလိပျ တံထှေး တှကေို…. အိမျသာအိုးထဲ ကိုယျတိုငျသှနျပွီး ပိုးသတျဆေး ဖွနျးပါ။ ရမြေားမြား သုံးပါ။ အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။
တဈနာရီ ခနျ့ ကွာမှ အခွားလူ ဝငျပါ။ လူနာနသေော အခနျးကို တခွားလူဝငျလငျြ Mask တပျပါ။ ပွီးလငျြ လကျဆေးပါ။ ဂရုစိုကျပါ။ တတျနိုငျသ၍ မဝငျပါနဲ့ ‼️ အားလုံးပွီးပွီ။ကောငျးပွီ။
၁၄ ရကျပွညျ့ပွီဆိုလြှငျ အခနျးကို ပိုးသတျသငျ့ပါတယျ။ ကိုယျ့ကွမ်မာကိုယျဖနျတီးရမဲ့အခြိနျ မို့ မဖွဈအောငျနပေါ။ ဖွဈလာရငျ မကူးအောငျနပေါ။ Credit: Original Post🙏
ကိုဗစ် လူနာ နဲ့ အိမ်မှာ ဘယ်လိုနေမလဲ ??
ကိုဗစ် လူနာကို ခုက အိမ်မှာထား ပြီး ပြုစုရတဲ့အေ နအ ထားဖြစ်လာပြီ။ ဒီတော့တခြား အိမ်သားတွေ မကူးဖို့ဆို စပြီး နှာစေး ၊ ချောင်းဆိုး ၊ ဖျား တခုခု စတာနဲ့ Covid လို့မှတ်။ မိုးမိတာတွေ ဘာတွေ မပြောပါနဲ့ ။Covid ပဲ။ ခွဲနေပါ။
ကြားထဲမှာ သက်သာသွားလို့တို့ ဘာတို့မလုပ်ပါနဲ့။ သက်သာပြီး လေးငါးရက်နေရင်အနံ့ ပျောက်ရင်ပျောက် ၊ မပျောက်ရင် ဝမ်းလျှော ၊ ချောင်းဆိုး ၊ အောက်ဆီဂျင်ကျတွေ ဖြစ်လာရော။ အဲ့ကျ တအိမ်လုံးကူးပြီးပြီ။ ကိုဗစ်က မာယာ များတယ်။
ကိုယ့်ကြောင့် ကိုယ့်မိသားစု တွေ ထိခိုက်ခံနိုင်ရင်တော့ သဘောပါ အခန်းသီးသန့် ခွဲ နေရမယ်။ အခန်းထဲက အပြင်ထွက်ရင် Mask တပ်ကို တပ်ရမယ်။ ထမင်းစားရင် အခန်းထဲမှာပဲ စားရမယ်။
စားပြီးသား ပန်းကန်တွေကို ကိုယ့်ဟာကို ဆေးရင်ဆေး၊ မဆေးရင် အခန်းထဲမှာ ဆပ်ပြာ ဇလုံထဲ ထည့်ထား.. .ပြီးမှ….တခြား လူကို …ဆေးခိုင်းပါ ရေချိုးခန်းနဲ့ အိမ်သာက အခန်းထဲ ရှိရင်ကောင်းတယ်။ မရှိရင် ရေချိုး ခန်းနဲ့ အိမ်သာ သွားရင် သတိထားပါ
အိမ်သာသွားရင် Mask တပ် ‼️ ရေချိုးရင်….. ****တံတွေး မထွေးရ**** ‼️ ****သလိပ်မဟပ်ထုတ်ရ****‼️ တံတွေး ထွေးခြင်း သလိပ်ဟပ်ခြင်းကို အခန်းထဲ ရောက်မှ လုပ်။
ပြီးရင် သလိပ်တံထွေးကို အဖုံးပါတဲ့ ဗူးနဲ့ ထွေး ပြန်ဖုံးထား။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲ့ သလိပ် တံထွေး တွေကို…. အိမ်သာအိုးထဲ ကိုယ်တိုင်သွန်ပြီး ပိုးသတ်ဆေး ဖြန်းပါ။ ရေများများ သုံးပါ။ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
တစ်နာရီ ခန့် ကြာမှ အခြားလူ ဝင်ပါ။ လူနာနေသော အခန်းကို တခြားလူဝင်လျင် Mask တပ်ပါ။ ပြီးလျင် လက်ဆေးပါ။ ဂရုစိုက်ပါ။ တတ်နိုင်သ၍ မဝင်ပါနဲ့ ‼️ အားလုံးပြီးပြီ။ကောင်းပြီ။
၁၄ ရက်ပြည့်ပြီဆိုလျှင် အခန်းကို ပိုးသတ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးရမဲ့အချိန် မို့ မဖြစ်အောင်နေပါ။ ဖြစ်လာရင် မကူးအောင်နေပါ။ Credit: Original Post🙏
Previous post အုတျ ကို မသုံးခငျ ရစေိမျခွငျး……..
Next post ဘိလပျမွအေိပျပျေါက မှတျသားဖှယျ အခကျြ(၁၇)ခကျြ နှငျ့ ဘိလပျမွေ (၉) မြိုး